Firongatry ny valanaretina…: feno mararin’ny Covid-19 sahady ireo Hôtel hopitaly roa | NewsMada
Fotoana fohy taorian’ny fisokafan’ireo H$otel hopitaly nambaran’ny fanjakana fa handraisana ireo mararin’ny valanaretina Covid-19, fantatra fa feno sahady ny efitrano 52 amin’ireo hotely lehibe roa; ny Live Hôtel etsy Andavamamba sy ny Tsanga Tsanga Hôtel, etsy Tsaralalana.
Anisan’ny Hôtel hopitaly nisokatra voalohany, ny herinandro lasa teo, ny Live Hôtel, etsy Andavamamba, sy ny Tsanga Tsanga Hôtel, Tsaralalàna, rehefa hita fa tsy maharaka intsony ny toeram-pitsaboana tsy miankina mandray ny Covid-19. ”Feno avokoa ny efitrano 37 ao amin’ny Live Hôtel hatramin’ny omaly ary miandry olona sitrana na koa misy marary mila afindra toerana noho ny fivoaran’ny fahasalamana vao misy efitrano malalaka indray”, hoy ny fanazavan’ny tomponandraikitra teny an-toerana. Mizotra tsara tsy misy olana goavana ny fandraisana an-tanana ary ampy ny fanafody sy ny mpiasan’ny fahasalamana manara-maso ny fitsaboana. 10 andro ny saran’ny famandrihana efain’ny marary eo am-pidirana ny toeram-pandraisana fa miankina amin’ny fivoaran’ny fahasalamany ihany. Efa nahazo fiofanana ny mpiasa rehetra hisahana ny asa. Feno marary toy izay koa ny efitrano 15 ao amin’ny Tsanga Tsanga Hôtel hatramin’ny omaly. Manaraka ny fitsaboana maha olona izy ireo, araka ny toromariky ny minisiteran’ny Fahasalamana.
Nisokatra, omaly, kosa ny Hôtel hopitaly Motel de Tanà Anosy, manana fandriana 40. Mandray ny tranga Covid-19 antonony ny eny an-toerana ary 60 ny mpitsabo sy ny “paramédicaux” miaraka amin’ny mpiasa hafa mampihodina ny hopitaly. Vita ny fiofanana ary nozaraina ny EPI hoenti-miasa. Mbola mandalo “triage” aloha ny marary tonga hizahana ny fahasalamany satria ny tranga antonony no raisina an-tanana eny. Manana “extracteur d’oxygène” ny Hôtel hopitaly ary ampy ny tahirim-panafody ilaina.
Nandray marary nanomboka omaly koa ny Anjary Hôtel Tsaralalàna manampy ireo efa am-perinasa.
Manefa hofan-trano ny marary
Nohamafisin’ny tomponandraikitra fa iantohan’ny fitondram-panjakana ny fanafody, ny fitsaboana, ny fanaraha-maso ary ireo fitaovana toy ny “concentrateur d’oxygène” izay ampiasaina hitsaboana ireo mararin’ny Covid-19 manaraka fitsaboana amin’ireo Hôtel hopitaly ireo. Anjaran’ireo marary ny miantoka ny hofan-trano sy ireo fanafody hitsaboana ireo aretina mitaiza toy ny diabeta, aretin’ny fo sy ny lalandra.